News Feed Archives | Page 15 of 41 | Frontier Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငွေသားမသုံးသည့်စနစ် ဖြစ်လာစေရန် ကူညီနေဟု UnionPay က ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို ပြောင်းလဲပေးရန် အားထုတ်နေပြီး ငွေသားမသုံးသည့်စနစ်ဖြစ်လာစေရန် အထောက်အပံ့ပေးနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု ကွန်ရက်ဖြစ်သည့် UnionPay က ပြောကြားသည်။ “သဘာဝ သယံဇာတများ ကြွယ်ဝပေါများသော၊ ငယ်ရွယ်သည့် လူဦးရေများပြားသော ငွေပေးချေမှု နည်းပညာသစ်များကို လက်ခံလိုစိတ်လည်း ပြင်းပြသော မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ.
စိန်ခေါ်မှုများအား အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ တိုက်တွန်း
ကျော်လင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကာ စိန်ခေါ်မှုများလည်း များစွာ ကျန်ရှိနေသေးပြီး စိန်ခေါ်မှုများကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 ခန်းမတွင် နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် Invest.
ရန်ကုန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချုံချင်းတို့အကြား ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ် စတင်
ရန်ကုန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချုံချင်းတို့အကြား ပထမဆုံး ပြေးဆွဲသည့် တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ စတုတ္ထအကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည့် Hainan Airlines က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်လိုက်သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အထူးတန်းနှင့် ရိုးရိုးတန်းခရီးသည် ၁၆၀ ဦးခန့်လိုက်ပါနိုင်သော.